ဗမာစစ်တပ်ဆိုတာ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
စသဖြင့် အကောင်းမရှိတဲ့စစ်တပ်ကိုတပ်မတော်လို.နာမည်ခံပြီးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာစစ်တပ်တစ်ခုသာရှိရမည်ဆိုပြီးသင်တို. ကိုငရဲကြီးအဝိစီဆီသို.ခေါ်သွားဖို.ကြံစည်းနေတယ်၊
ဒီလိုစစ်တပ်မျိုးကိုတိုက်ဖျက်ဖို.ကသင်တို.မှာတာဝန်ရှိတယ်၊ဗမာစစ်တပ်လက်အောက်မှာသင်တို.နေထိုင်ဖို.မလိုဘူး၊နယ်ခြား စောင့်တပ်လုပ်ဖို.မလိုဘူး၊သူတို.ကိုတိုက်လို.သေဆုံးသွားရင်ကောင်းရာလမ်းကြောင်းကိုဘဲသင်တို.ရောက်ရှိသွားမှာသေချာ တယ်၊ဒီစစ်တပ်ကိုသင်တို.အခုပစ္စုပန်မတိုက်ဖျက်ရင် သင်တို.၏နောက်လာနောက်သားများအဆက်ဆက်ဒီနေ.အလာတူ သို. မဟုတ် ဒီနေ.ထက်ပိုပြီး အထက်ပါအချက်များ၏ဆိုးကျိုးများကိုခံစားနေရအုံမယ်၊ရန်သူနဲ.ပူးပေါင်းမည့်အစားသင်တို.၏လူထု နဲ.ပူးပေါင်းပြီး ထိုးစစ်ဆင်ရမည်၊သူတို.ကိုဖက်ဆစ်စစ်တပ်၊ဖက်ဆစ်အစိုးရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဝိုင်းတိုက်ရမယ်၊တစ်သက်လုံးမ ယုံနဲ.၊ရန်သူအဖြစ်အမြဲသတ်မှတ်ပါ၊သင်တို.၏လူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးနှင့်တိုင်းသူပြည်သားများအတွက်လွတ်လပ်သောလူ
တင်ရမယ်၊တိတ်တဆိတ်လူမျိုးသတ်ဖြတ်ဖြုံးတီးမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပါ၊စစ်ရေးအကူအညီတွေကိုရယူပါ၊စစ်တပ်ရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေကိုသင်တို.အခြေခံဥပဒေမဟုတ်ဘူး၊သူတို.ဥပဒေသူတို.လေစားခိုင်းပါ၊သူတို.ပြုလုပ်မည့်ရွေကောက်ပွဲကသင်တို. ရွေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး၊တက်လာမည့်အစိုးရအသစ်ကလည်းသင်တို.အစိုးရမဟုတ်ဘူး၊သင်တို.အစိုးရသင်တို.ဘာသာဖန်းတီး ရမယ်၊သင်တို.မြေမှာသူတို.နေတယ်၊ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတယ်၊သင်တို.ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုနဲ.သူတို.ဘာသာစကား ယဉ်ကျေးမှုမတူကြဘူး၊ဒါကြောင့်၊ သင်တို.ကိုကျွန်းပြုထားတယ်၊အသိအမှတ်ဘယ်တော့မှမပြုဘူး၊
ထို.ကြောင့်၊ သင်တို.အတွက်နယ်ခြားစောင့်တပ်စကားနာမယောင်နဲ.၊ရွေကောက်ပွဲအကြောင်းဘက်မစောင်းနဲ.၊ငြိမ်ချမ်းရေးစ ကားဘေးဖယ်ထားပါ၊ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်ထိုင်မစောင့်နဲ.၊ဖက်ဆစ်အစိုးရကိုဝိုင်းချကြပါ၊ငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတာအင်းအားမျှမှတည် ဆောက်လို.ရတယ်၊အပြောင်းအလဲဆိုတာအင်းအားသုံးမှဖြစ်မယ်၊စစ်မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုဘယ်သူမှမလိုလာအားမပေးကြဘူး၊
ဥက္ကဌနှင့် လဝကတို့မှ ပြည်ပသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်သူစာရင်း လိုက်လံကောက်